छोराको सन्देश | सिमान्तMarginal छोराको सन्देश – सिमान्तMarginal
Posted on 25 Dec 2014 25 Dec 2014 by Jesi | INCOMESCO
आदरणीय बाबा, आमा! तपाईँहरुबाट म हराएको भोलि पैंतालिसौं दिन हुँदैछ । मलाई थाहा छ तपाईंहरु पुत्रको वियोगमा प्रत्येक निमेष छट्पटाइरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई मैले दुःखमाथि दुःख थप्ने क्रम कमसे कम अब सकियो भनी ठानी दिनुहोला । र मेरो काजक्रिया गरेर संस्कारको बन्धनबाट छुटकारा पनि लिनुहोला ।
भाइ, म र तपाईंहरु सपरिवार जिन्दगी बनाउने ठूलो सपना बुनेर चार सालअघि विदेश छिरेका थियौं । नयाँ ठाउँ, नयैँ समस्या । भाषाको समस्याको कारण कति पटक बिचरा आमा हराउनु भयो । एकपटक त पुलिसले कागजसमेत गराएर बुझाएको थियो । यहाँको कुनै पनि प्रबिधिसँग परिचित नभएकै कारण हामीले हजार हण्डरहरु खायौं । दुःखहरुको सामना गर्दा छोराहरुको भविष्य भनी चित्त बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो । ती दुःखका दिनहरु कोट्याएर म तपाईंहरुको घाउमा झन् नुनचुक थप्न चाहन्नँ । तपाइहरुको सपना भताभुङ्ग नहोस् भनेरै मैले यो दुनिया छाड्ने निर्णय लिएको हुँ । पक्कै पनि यो खबर सुनेर मलाई नौ-नौ महिनासम्म गर्भमा हुर्काउनु भएकी मेरी प्यारी आमा भक्कानिएर मूर्छा पर्नुहुनेछ । आमा !, मसँग मृत्युबाहेक कुनै विकल्प थिएन । त्यसैले मैले यही नै निर्णय लिएको हुँ ।
बाबा, आमा! म अहिले नर्कमा छु । धरतीमा मैले गरेका कर्मको लागि दश वर्ष नर्कमा बिताउनु पर्छ, अनि बल्ल स्वर्ग छिर्ने मेरो बाटो क्लियर हुनेछ । त्यस पछिको पाँच वर्ष मैले स्वर्गमा परीक्षण भीसामा रहनुपर्छ । अनि बल्ल, मलाई स्वर्गको ग्रीन कार्ड प्राप्त हुने छ ।
बाबा, आमा! म अहिले नर्कमा छु । धरतीमा मैले गरेका कूकर्मको लागि दश वर्ष नर्कमा बिताउनु पर्दोरहेछ । त्यसपछि स्वर्ग छिर्ने मेरो बाटो क्लियर हुनेछ । त्यस पछिको पाँच वर्ष मैले स्वर्गमा परीक्षण भीसामा रहनु पर्छ । अनि बल्ल, मलाई स्वर्गको ग्रीन कार्ड प्राप्त हुने छ । मैले यो अवधिमा कुनै पनि गलत काम गरेको पाइएमा मेरो चोला बदलेर सोझै त्यतै फर्काइने छ । त्यसैले म यतिखेर अशल यात्रामा छु । यो नर्कले मलाई अशल हुन घेराबन्दी गरिराखेको छ, मेरो स्वतन्त्रता त स्वर्गको ग्रीन कार्ड पाएपछि कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो भने पछि नै विचार गरौंला । सुनेको छु, त्यहाँ त सबै कुरा गर्न पाइन्छ रे, हेरौं पछिको कुरा के हुन्छ । त्यस पछि मिल्यो भने तपाईंहरुलाई पनि यतै ल्याउने विचारमा छु ।
कता हिजो एक्लिएको लाइफ, कता आजको ग्यादर र साथी सर्कलको मज्जा । म हराउँदै गएँ, झुम्दै गएँ, र डुब्दै पनि गएँ । म खहरे भेल पुछारमा सुक्दै गएँ, तपार्इँहरु तालिएको तलाउ चर्को घाम र तापमा सुकिरहनु भयो । यो कुरा न तपाईंहरुले बुझनुभयो, न मैले तपाइहरुलाई बुझाएँ।
सबै सपना रहेछ भनेर मेरो बाटो कुरी नरहनु होला । जीवनमा मलाई धेरै पश्चाताप भयो । त्यसैले अचम्मको परिवेशमा मैले आत्महत्या गरिदिएँ । म मरिसकेको छु । काजक्रिया गरेर ढुक्क हुनका लागि मैले सपनामा मै आएर भए पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेँ । भाइलाई पनि मेरो बारेमा सुनाइदिनुहोला ।विदेशमा बस्न मात्र होइन कि उसलाई अशल मान्छे बन्न पनि सिकाउनु होस् । हवस् त, हतार भइसक्यो…। फेरि चित्रगुप्तले सबै रेकर्ड गर्छन् । आमालाई ढोगेर बिदा हुन्छु है…….?
@ जगदीश वाग्ले
merouk.com June 19th, 2010
Previous Postकाङ्रेस, कोइराला डाइनाष्टी र चार सNext Postविकल्प खोजिनु पर्छ, त्यो २०४७ को संबिधान हुन सक्छ